UWiko Lenny 4, iselfowuni eyimpumelelo ye-120 euro | Iindaba zeGajethi
I-Wiko yenye yeenkampani ezinezona ndawo zininzi kwiimarike. Ukudityaniswa kwayo kwangoku ngumzekelo UWiko Lenny 4Isixhobo esikwinqanaba lokungena esibonelela ngeempawu zobuchwephesha ezinomdla kwaye ziya kuthengiswa ngexabiso elinokhuphiswano olukhulu. Kwakhona liqela onokulufumana kwii-shades ezahlukeneyo: igolide, igolide evukile kunye nomnyama.
Kwelinye icala, ezinye zezona zinto zinomdla koku efowuni Sisikrini sayo se-HD, isiqwenga esinye sentsimbi esisinyithi, ngokunjalo enye yeenguqulelo zamva nje ze-Android ezifakwe ngaphakathi ngaphakathi. Ngaba uyafuna ukwazi ixabiso layo? Ngaba unomdla kwizixhobo ezinamaxabiso aphantsi ezinezibonelelo ezaneleyo zokukunika inkonzo kwimihla ngemihla? Le Wiko Lenny 4 inokuba yenye yeendlela eziphezulu.
1 Ukubonisa kunye nokuma
2 Amandla eWiko Lenny 4: iprosesa kunye neenkumbulo
3 Iikhamera zeefoto: ngasemva nangaphambili
4 Unxibelelwano kunye nenkqubo yokusebenza
5 Ukuzimela kunye nexabiso
Ukubonisa kunye nokuma
Umda we-Wiko Lenny 4 uqhelekile: Inandipha itekhnoloji ye-IPS kwaye ibonelela ngobungakanani bee-intshi ezintlanu. Ukongeza, isisombululo sayo sikwinkcazo ephezulu. Kodwa lumka, ungalindeli okokugqibela: iza ngeepikseli eziyi-1.280 x 720; okt isisombululo seHD. Kwelinye icala, ayisisixhobo esinamaqhosha omzimba angaphambili, kodwa endaweni yoko uya kufumana amaqhosha aqhelekileyo abekwe emazantsi kwesikrini.
Ngokubhekisele kwimathiriyeli ye-chassis yayo, eyisiqwenga esinye, asazi ncam ukuba yialuminiyam okanye yenye ingxubevange. Yintoni umenzi ayicacisa gca kukuba sijamelene ne efowuni isinyithi, ke iya kuba yinto enganyangekiyo kunezixhobo ezindala ezenziwayo ezenziwe nge polycarbonate. Ekugqibeleni, ubukhulu bayo bungu-9,1 iimilimitha kwaye ubunzima bayo bebonke zii-170 yeegram.
Amandla eWiko Lenny 4: iprosesa kunye neenkumbulo
Ngokubhekisele kumandla, i UWiko Lenny 4 ubonelela nge-4-core processor Inkqubo enexesha lewotshi ye-1,3 GHz.Le yimodeli yeMediaTek MT6737, isixhobo esisezantsi / esiphakathi kwezixhobo esiya kwanela imisebenzi yemihla ngemihla. Kule processor kufuneka kongezwe 2GB RAM, inani eliwela kancinci xa kuthelekiswa neemodeli zamva nje esizibonayo zivela kwimarike.
Ngokwenxalenye yayo, imemori yokugcina yangaphakathi iya kuba yi-16 GB kwaye iya kwamkela amakhadi ememori kwifomathi ye-MicroSD ukuya kuthi ga kwi-64 GB (hayi kakhulu, kodwa iya kwanela ukubamba iifoto ezininzi kunye namaxwebhu). Ngoku, khumbula ukuba ungasoloko ubheja kwiinkonzo ezisekwe kwi-Intanethi ezinje ngeDropbox, Google Drayivu, njl.
Iikhamera zeefoto: ngasemva nangaphambili
Kweli candelo kuya kuba kukuzikhohlisa ukulindela iziphumo ezidumileyo njengokufiphala kwisitayile esicocekileyo se-bokeh. Nangona kunjalo, ikhamera yangemuva yeWiko Lenny 4 ine-8 megapixel sensor isisombululo esakhelwe ngaphakathi. Uyakwazi ukuthatha iifoto zepanoramic, usebenzise itekhnoloji ye-HDR, imo yobuhle-ewe, uya kuba mhle ngakumbi-kwaye usebenzise izihluzi ukuphucula ukubanjwa. Iyakwazi nokurekhoda iividiyo. Iya kubabamba ubuninzi be-1080p (i-HD epheleleyo) kwi-30fps.
Ngaphambili kwesiphelo uya kuba nakho enye ikhamera ene-5 megapixel sensor. Oku kuyakuba kukujongana nokwenza i uqobo okanye ube yiwindow yakho kwiifowuni zevidiyo. Kule meko, ukuphucula ukukhanya kumabala amnyama, isikrini siya kusebenza njenge-flash for captures.
Unxibelelwano kunye nenkqubo yokusebenza
Unxibelelwano onokuyonwabela kule Lenny 4 esuka eWiko yinto yesiqhelo. Mhlawumbi kufuneka sigxininise ukuba, njengakwezinye izixhobo ezifanayo, ingabamba ii-SIM khadi ezimbini ngaphakathi. Ngoku, ukuba usebenzisa imemori khadi, lo msebenzi uya kunyamalala.
Ke ngoko, kwimeko yokudibanisa siya kuba nesantya esiphezulu seWiFi, iBluetooth, ithuba lokwabelana nonxibelelwano lwethu lwe-intanethi kunye nezinye izixhobo okanye sikwazi ukusebenzisa izixhobo zangaphandle enkosi kuyo Izibuko le-USB OTG.
Ngokumalunga nenkqubo yokusebenza, i-Android yeyona ilawula intengiso. Kwaye kule meko Uya kuba nohlobo lwe-Android 7.0 Nougat efakiweyo. Oku kuthetha ukuba awuyi kuba neengxaki zokuhambelana nekhathalogu epheleleyo yeGoogle Play. Ngoku, ungalindeli ukusebenza kakuhle kwimidlalo yevidiyo efuna amandla angaphezulu.
Ukuzimela kunye nexabiso
Into yokugqibela esiza kukuxelela ngayo ngale Wiko Lenny 4 malunga nokuzimela kwayo. yakhe Ibhetri yangaphakathi zii-2.500 milliamps umthamo. Eli nani lityhila ukuba uyakufika ekupheleni kosuku unamandla athile ngaphambi kokuba ungene kwiplagi. Ngoku, le ihlala ihambelana: yonke into iya kuxhomekeka ekusebenziseni nganye nganye.
Okwangoku, njengoko besesitshilo ekuqaleni kwenqaku, elinye lamabango aphambili eWiko Lenny 4 lixabiso lawo. Kwaye ungayifumana nge I-119 euros kuyo nayiphi na imibala esidwelise ekuqaleni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » UWiko Lenny 4, iselfowuni eyimpumelelo ye-120 euro
Iimodeli ezintsha zeMichael Kors smartwatches ezikhoyo ngoku kwintengiso